Ururada haweenka Mudug oo soo dhaweeyay is-badalkii lagu sameeyay wasaaradda haweenka & hormarinta qoyska Puntland. – Radio Daljir
Seteembar 19, 2012 3:53 b 0
Gaalkacyo, Sep 19- Qaar ka mida haweenka gobolka Mudug ayaa soo dhaweeyay isku-shaan-dhayntii dhawaan golaha wasiirada uu ku sameeyay madaxweynaha Puntland C/raxman Sh Maxamed Maxamuud Faroole, gaar ahaan is-badalkii dhanka xilalka uu ku sameeyay Wasaarada haweenka iyo hor-marinta qoyska Puntland.
Gudoomisada Ururka midaynta haweenka Soomaaliyeed qaybna ka ah dalada Dal-hadhso Xirsiyo Cumar Xuseen oo maanta waraysi siisay radio daljir ayaa soo dhawaysay is-badalka lagu sameeyay wasaarada haweenka iyo hormarint qoyska Puntland iyadoo sheegtay inay ku hadlayso ururada haweenka Mudug, waxayna sheegtay inay si ballaaran u soo dhawaynayaan xilka loo magacaabay wasiirada cusub oo aan wali la dhaarin oo ku maqan dalka dibadiisa.
Xirsiyo ayaa sheegtay inay muhiim tahay in qofka markuu xilka waqti badan hayo la badalo si uu u yimaado is-badal dar-dar leh, qaabka uu madaxweynuhu u qaabeeyay isku shaan-dhantana ay ahayd mid wanaagsan ayna soo dhawayanayaan.
Hadalkan haweenka Mudug ayaa ku soo aadaya xili dhawaan madaxweynaha Puntland C/raxmaan Sh Maxamed uu sameeyay isku-shaandhayn golihiisa wasiirada xubnihii xilka uu ka qaadayna ay ka mid ahayd wasiirada haweenka & hormarinta qoyska Puntland Caasho Geele Diiriye oo muddo 15 sannaa ku soo dhex jirtay saaxa siyaasadeed ee Puntland, kana mid ahayd xubnihii ugu horeeyay.
Ciidamada huwanta oo 30km u jira Kismaayo, iyo Al-shabaab oo isaga-baxay magaaladaasi.